Nosy La Réunion | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, Frantsa
Ny sisa tavela amin'ny fanjakana taloha sy tsy ara-drariny dia mbola hita any amin'ny vazan'izao tontolo izao. Toy izany ny Nosy La Réunion, iray amin'ireo ankehitriny Faritany frantsay any ampitan-dranomasina hita ao amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Akaiky an'i Madagasikara ny nosy Réunion ary manana ny endriny mahafinaritra. Te hiala vakansy amin'ity faritra mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao ity ve ianao? Lasa izao.
1 Nosy La Réunion
2 Fitsangatsanganana any amin'ny Nosy La Réunion
Ny nosy dia misy 2500 kilometatra toradroa ambonin'ny ary avy amin'ny volkano. Raha ny tena izy, ny volkano mihetsika dia miakatra sahabo ho 2630 metatra ny haavony ary tena mitovy amin'ny volkano mahery sy velona any Hawaii izy io. Volkano mihetsika izy io, nanana fipoahana zato hatramin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'izao ary satria tsy izy irery no Piton de la Fournaise dia miaraka amin'ny Python des Neiges, mila mailo hatrany ianao.
Ankafizin'ny nosy a toetrandro tropikaly, fa ny haavo no mampisondrotra azy. Araka izany, avy ny orana ary mafana ny andro eo anelanelan'ny Novambra sy aprily ary mangatsiaka kokoa eo anelanelan'ny Mey sy Novambra. Io toetr'andro sy ny hetsika ara-jeolojika io no manome ny nosy ifiainana voajanahary tsy mampino. Misy karazam-borona isan-karazany sy zavamaniry tsara tarehy, nefa koa misy zava-mahatalanjona eny amoron-dranomasina, ambanin'ny ranomasina, miaraka amin'ny zava-mahatalanjona Haran-dranomasina.
Izy io dia mitazona ny asany ara-toekarena lehibe, ny famokarana siramamy, saingy saika ny zava-dehibe indrindra dia ny angovo sy ny sakafo. Ny isam-poniny tsy mahatratra mponina iray tapitrisa ary misy vilany fandrendrehana, eo anelanelan'ny karana, afrikanina, malagasy sy eropeana. Fanjakan'ny frantsay any ampitan-dranomasina eto ny fiteny ofisialy dia frantsay, fa ny teny kreôla koa dia be mpampiasa.
Fitsangatsanganana any amin'ny Nosy La Réunion
Ny nosy dia feno fifanoherana, tsy manam-paharoa. Mety tsy dia be mpitia toy ny mpifanila vodirindrina aminy, Maorisy na Seychelles izy io, fa raha te handositra ireo làlana malaza ianao dia toerana tsara indrindra.
Izy io dia manana volkano mavitrika, morontsiraka misy rano mangarahara sy mafana, tendrombohitra ary ala. Miaraka amin'ireto fomba fijery ireto dia afaka manao ny zavatra rehetra ianao, manomboka amin'ny fandrianao ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro ary tsy misy zavatra hafa tsy hivezivezena am-pilaminana manodidina ny zavatra rehetra.
Ny atin'ny Nosy Réunion dia be tendrombohitra sy goavambe. Ity misy volkano mandry iray, Salazies Mountain, any andrefana. Eo ihany koa ny Gran Brule Mountain, any atsinanana, ary mazava ho azy, ny volkano mifoha, ny Python de la Fournaise ary ilay volkano mandry, ny Python des Nieges manana haavo 3 XNUMX metatra mahery.
Hay boay telo na boribory manjakazaka amin'ny jeografia anatiny misy azy ary hita ho toy ny amphiteater naturel. Ny kaldera dia volkano iray nianjera ho azy ka karatra paositra tsy hay hadinoina. Ny valahany dia Salazie, Cilaos ary Mafate. Samy manana ny azy izy rehetra: na izy ireo tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana, na amin'ny lakana, na bisikileta, manomboka amin'ny vohitra an-tendrombohitra ka hatramin'ny vohitra iray. Tsy misy tsara tarehy noho ny iray hafa. Izy rehetra dia.
Ny Cirque de Salazie no kaldera lehibe indrindra sy maintso indrindra amin'ny telo. Manana barika lalina sy lava izy, manamorona ny sisiny riandrano sy lohasaha ary havoana mihoatry ny 100 mahery. Ny riandranon'i Le Voille de la Marièe dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto. Ny latsaka an-tapitrisany amin'ny tsifotra azy dia toa tulle ... Eto koa ianao dia afaka mandeha lakana mamaky ny hadilaniny lalina ary mitsidika ny sary mahafinaritra Vohitra Hell-Bourg, frantsay tsara.
Ny Cirque de Cilaos mahagaga ihany izany, rakotra voninkazo sy ala ary dobo ary riandrano. Malaza ihany koa ny lakana, toy ny fiakarana na fihanihana ny kaldera. Misy lalana maro ary misy ny mitondra anao any Vohitra Cilaos, miaraka amin'ireo tanimboalobony na ny vohitra La Roche Merveilleuse, misy fandroana mafana. Eo afovoan'ny nosy ity kaldera ity. Mbola avaratra andrefana ny Cirque de Mafate.
Io vay io voahodidin'ny tendrombohitra tanteraka izy io ary io dia anjara mahatsiravina tokoa izay helikoptera na an-tongotra ihany no nahatongavanao. Tsy misy lalana voavoatra, tsy misy fiara, ka ny mpandeha an-tongotra ihany no misy. Amin'ny ankapobeny, ny mpitsidika dia avy eto amin'ireo vata roa hafa, izay azon'ny fiara aleha raha tianao. Na izany na tsy izany, ny hevitra tonga amin'ny rivotra.
Ity vinaingitra fahatelo ity tanàna iray monja io. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao tonga ny olona, ​​andevo nandositra ny tompony izy ireo. Ny tanàna tokana eto dia, avy eo, vaovao. Tsy misy herinaratra ao aminy fa ny tontolon'ny masoandro na ny mpamokatra herinaratra ihany. Toerana lavitra sy tsy fahita firy.
About Wiki ny morontsiraky ny Nosy La Réunion, tia namana kokoa olona, ​​dia izy ireo no misy tanàna sy vohitra. Ny morontsiraka andrefana no tompony tora-pasika mangina toerana anaovana spaoro rano maro. Ireo izay tia ny snorkeling sy antsitrika manana ny tanànan'ny St-Gilles-les-Bains Eny, ny vatoharan-dranomasina ihany no ao. Tsy toy ny, St. Leu mety ho an'ny surf sy ny olona te-hitsangatsangana amin'ny tsena ary hahafantatra ny kolontsaina creole.
Ny morontsiraka avaratra dia misy ny tanànan'ny St. Denis, ny andriamby ho an'ny mpizahatany satria sady manome morontsiraka no tendrombohitra. Ity koa trano fisakafoanana, hotely, galeriana zavakanto, zaridaina .... Ny morontsiraka atsinanana no misy ny fambolena fary sy lavanila ary trano mendri-kaja. Aza adino, ny morontsiraka eto dia tena be ala.
Ary farany, ireo namana volkano roa: Piton des Neiges sy Piton de la Fournaise. Piton des Neiges dia 3070 metatra ny haavony ary tsy hita ny nosy. Any amin'ny faritra afovoany avaratra izy io ary volkano efa rava izay nandry nandritra ny roa arivo taona teo ho eo. Manana zotra mankany amin'ny tampony izy io na dia tsy dia sarotra loatra ny mandeha an-tongotra. Misy tahiry biolojika eo amin'ny tehezany mahafinaritra.
Amin'ny lafiny iray, ny Piton de la Fournaise dia eo amin'ny zoro atsimo atsinanan'ny nosy. Izy io dia iray amin'ireo volkano miasa indrindra eto an-tany ary 2631 metatra ny haavony. Mazava ho azy fa io no manintona malaza indrindra eto amin'ny Nosy La Réunion. Ka ny Nosy La Réunion dia natao ho an'ireo tia natiora tsara nefa mahery. Manana ny azy ve izy hampifangaro ny lisitry ny toerana mety hahatongavanao aorian'ity areti-mandringana mampalahelo ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Nosy La Réunion
Combarro, tanàna mahafinaritra any Galicia